EURUS III Fan Plafond amin'ny Lobby - mpankafy Kale
EURUS III Ceiling Fan ao amin'ny Lobby
Nahita anay tao amin'ny tranokalanay ny mpanjifa iray ary nilaza taminay izay ilainy, araka ny fangatahany, dia nanoro ny mpankafy valin-drihana KALE FANS EURUS III izahay ho an'ny lobbyny, tena faly tamin'ireo mpankafy KALE izahay.
Ireo sary ireo dia ny seho an'ireo mpankafy KALE napetraka ao amin'ny efitranon'ny toerana samihafa. Avy amin'ireo tranga ireo dia hitantsika fa tena malaza ny mpankafy valin-drihana EURUS III, mampiasa PMSM (motera magnetika maharitra).
Raha tsy fantatrao ny fomba hisafidianana ny modely samihafa, aza manahy, ny teknisianina matihanina dia hanoro ny vahaolana mety sy ara-toekarena ho anao araka ny filanao. KALE FANS no antoka marika ho an'ny rivotra sy ny fampangatsiahana, raha liana amin'ireo modely ireo ianao dia manorata eto ary alao ny valiny.